युगसम्बाद साप्ताहिक - यो निर्वाचनले मुलुक भड्खालोमा जान्छ - सीपी गजुरेल– उपाध्यक्ष नेकपा–माओवादी
Thursday, 12.12.2019, 10:11pm (GMT+5.5) Home Contact
यो निर्वाचनले मुलुक भड्खालोमा जान्छ - सीपी गजुरेल– उपाध्यक्ष नेकपा–माओवादी
Monday, 04.01.2013, 06:58pm (GMT+5.5)
० मुलुक संविधानसभाको अर्को निर्वाचनमा होमियो भनिएका बेला तपाईहरू भने निर्वाचन विथोल्ने अभियानमा हुनुहुन्छ । के मुलुकलाई निर्वाचन नचाहिएर यसो गर्नुभएको हो ?
पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन संविधान बनाउनकै निम्ति, मुलुकलाई संविधान दिनकै निम्ति गरिएको थियो तर यिनै चार दलका कारण संविधान बन्न सकेन र संविधानसभाको विघटन गरियो । संविधान नबनिकन संविधानसभा विघटन गर्ने तिनै तत्वहरू, देशलाई संविधान नदिने राजनीतिक दलका नेताहरू आज विभिन्न खालका सहमति गर्दै, बाधा अड्काउ फुकाउको नाममा संविधानका प्रमुख २१ वटा धाराहरू निलम्बन गरेर अहिलेको अवस्थाको सबैले मानेको सर्वमान्य अन्तरिम संविधानलाई ध्वस्त पारेर निर्वाचनतिर गैरहेका छन् । निर्वाचनका निम्ति भन्दै संविधानको धाराले निषेध गरेको व्यक्तिलाई सरकार प्रमुख बनाएर चुनाव गराउँदैछन् ।
हाम्रो विरोध यसैबिरुद्ध हो । हामी निर्वाचनको बिरुद्धमा छैनौं । पहिलो कुरा यो असंवैधानिक कदम हो र अहिले निर्दलीय सरकार बनेको छ । मुलक निर्दलीयतातर्फ फर्केको छ र चार दलको निरंकुशता फेरि प्रकट भएको छ । त्यसो भएको हुनाले यो सामान्य निर्वाचनको कुरा मात्र नभएर ठूलो ‘डिजाइन’ भैरहेको छ । नेपाललाई निरंकुशतातर्फ धकेल्ने र विदेशीहरूको इशारामा नेपाललाई असफल बनाउने अभियान चलिरहेको छ । चुनाव त नाटक मात्रै हो । त्यसकारण यो निर्वाचन संविधान बनाउनका निम्ति गरिएको निर्वाचन होइन ।
० तपाईंको विश्लेषणलाई सही मान्ने हो भने त निर्वाचन नै हुँदैन भन्ने पो देखियो त ?
पहिलो कुरा त निर्वाचन हुँदैन । यदि भयो भने निर्वाचनका लागि निर्वाचन मात्र नगरिएर अर्कै उद्देश्यका लागि गरिएको हुनाले निर्वाचनको नाटक मात्र हुन्छ । वास्तविक निर्वाचन हुनेवाला छैन । त्यसकारण यस्तो निर्वाचन गराउनुको कुनै औचित्य नै छैन ।
० चुनावको तयारी तीब्र भैरहेको छ । जनतामा पनि उत्साह देखिएको छ भनिन्छ । यसले तपाईंहरू निर्वाचनमा जान डराएर मात्र विरोध गर्नुभएको भन्न सकिन्छ कि सकिंदैन ?
अहिले मुलुकमा निर्वाचनको ‘ज्वरो’ नै आइसक्यो भन्ने जुन प्रचारवाजी भैरहेको छ त्यो एउटा पाखण्ड मात्र हो । हामी पनि जिल्ला–जिल्ला, गाउँ–गाउँ पुगेका छौं । जनतालाई यो निर्वाचनसंग कुनै मतलब नै छैन र यो निर्वाचनबाट संविधान बन्छ भन्ने विश्वास नै छैन । वास्तविक स्थिति यो हो । यी राजनीतिक दलका नेताहरूले जुन धोका दिएका छन् त्यो धोकालाई नेपाली जनताले बिर्सेका पनि छैनन् किनभने नेपाली जनता यतिबेला धेरै सचेत छन् । त्यसो हुनाले यो निर्वाचन जनता र राष्ट्रको हितमा नहुने मात्र हैन कि जसरी एउटा निरंकुशता लागिदंदैछ र जसरी प्रतिगमन हुँदैछ त्यसको यथार्थ जानकारी जनतालाई हुने हो भने अहिलेको सामान्य अवरोध मात्र होइन जनताले धेरै ठूलो आक्रोश व्यक्त गर्ने स्थिति म देख्छु ।
० तपाईंहरू, संविधान, लोकतन्त्र, विधिको शासनको कुरा गर्नुहुन्छ तर यी सबैका लागि त निर्वाचनमा जानुपर्ने होइन र ?
यहाँ एउटा अनौठो तर्क के गरिन्छ भने निर्वाचन भन्ने वित्तिकै त्यो लोकतान्त्रिक हुन्छ र लोकतान्त्रिक हक र अधिकारका लागि नै त्यो गरिएको हुन्छ भन्ने गरिन्छ । यो परिभाषा सुन्दा अनौठो लाग्छ । यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने पञ्चायतकालका हरेक निर्वाचनलाई कांग्रेस–एमालेले किन वहिस्कार गरे । राजा ज्ञानेन्द्रले गराएको निर्वाचन किन वहिस्कार गरेको त ? निर्वाचन गर्दैमा लोकतान्त्रिक हुन्छ र जनताको हक अधिकारका लागि हुन्छ भनेर मान्ने हो भने यी प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ कि पर्दैन । लौ ती कुरा छाडिदिउँ, डा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा मंसिर ७ गतेका लागि त निर्वाचनको घोषणा नै गरेका हुन्, त्यो चुनाव किन वहिस्कार गरेको ?
यहाँ विडम्बनापूर्ण अवस्था के रह्यो भने आफूले भाग नलिंदा र वहिस्कार गर्दा निरंशुक हुने, आफूले निरंकुशता लाद्न पाउँदा र मुलुकलाई अंशवण्डा गराएर शासन गर्ने अधिकार लिन पाउँदा त्यही चुनाव बडो लोकतान्त्रिक हुने ! यो कुनै शाश्वत परिभाषा हैन । निर्वाचन आवश्यक छ । राष्ट्र र जनताले आफ्नो अभिमत प्रकट गर्न र जनताको हितको प्रयोजनका निम्ति गरिने निर्वाचन आवश्यक छ । हामी कोही पनि निर्वाचनको विरोधी होइनौं तर अहिले जुन निर्वाचन हुँदैछ यो देशलाई झन् भड्खालोमा हाल्न, राष्ट्रिय स्वाधीनता नै समाप्त पार्नका निम्ति चलिरहेको डिजाइनमा भएकाले यो निर्वाचनमा भाग लिनुको अर्थ त्यसलाई स्वीकार्नु हो । देशघातलाई अनुमोदन गर्नु मात्र हो ।
० त्यसो भए निर्वाचन स्वतन्त्र हुँदैन भन्ने पनि यहाँको दावी हो ?
हो, जसरी भागवण्डा लगाएर मन्त्रिमण्डल बनेको छ त्यसबाटै स्पष्ट हुन्छ नि । यहाँ त भाग लगाइएको छ । दुईटा मन्त्री प्रचण्डलाई, दुईटा, सुशील कोइरालालाई, दुईटा झलनाथ खनाललाई र एकवटा गच्छदार र एउटा राष्ट्रपतिलाई । यसरी भाग लगाएर जव चुनावी मन्त्रिमण्डल बनाइन्छ भने यो निष्पक्ष हुन्छ भनेर कसरी भन्न सकिन्छ ? अनि चार दल बसेर जे गरे पनि हुन्छ भन्ने त हुँदैन नि । चार दलले अहिले दैवी शक्ति प्राप्त गरेको जस्तो देखाइरहेका छन् । उनीहरूले त कालोलाई सेतो र सेतोलाई कालो, दिनलाई रात, रातलाई दिन, जे भनिदिए पछि हुन्छ भन्ने खालको शैलीमा गरिने निर्वाचनको कुनै औचित्य छैन । सबै भागवण्डा लगाइसकेपछि सिंहदरबारमै बसेर यो यो दललाई यतियति सिट भनेर भागवण्डा लगाए भैहाल्यो नि यत्रो नाटक किन गर्नु ?
० तपाईंले भनेजस्तै चार दलको हैकमलाई निर्वाचन नगराएर अन्त्य गराउन सकिन्छ त ?
यसलाई हामीले दृढतापूर्वक अस्वीकार गर्नुपर्छ र यिनीहरूको निरंकुशतालाई चुनौति दिनैपर्छ । यस्तो खालको प्रणाली बस्न दिनु हुँदैन । हामीले निरंकुशताबिरुद्ध यत्रो ठूलो संघर्ष र बलिदानी गर्यौं । फेरि अर्को निरंकुशता नेपाली जनताले कसरी स्वीकार्ने ? हाम्रो लागि त यो स्वीकार्य छैन । त्यसो भएको हुनाले निरंकुशता र राष्ट्रिय स्वाधीनता बिरोधी षड्यन्त्रलाई भण्डाफोर गर्नका निम्ति यो निर्वाचन हुनुहुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।
० तपाईंहरूको माग के हो त ? कुन कुरा पूरा भयो भने निर्वाचनमा जानुहुन्छ ?
हाम्रो माग त प्रष्ट छ । संविधानमाथि अतिक्रमण गरेर बाधा अड्काउ फुकाउको नाममा संविधानका धाराहरू निलम्बित गरिएका छन् त्यो खारेज हुनुपर्छ । त्यस्तै चार दलले कथित ११ बुँदे सहमति जुन गरेका छन् त्यो फिर्ता लिनुपर्छ, प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई असंवैधानिक तरिकाबाट सरकार प्रमुख बनाइएको छ त्यो हटाइनुपर्छ र कमसेकम विघटित संविधानसभाभित्र रहेका राजनीतिक दलहरूको बीचमा एउटा सहमति कायम गरिनुपर्छ र राष्ट्रिय एकताको सरकार बन्नुपर्छ । हाम्रा माग यिनै पाँचवटा हुन् । यो काम भयो भने जनताको आकांक्षा पनि पूरा गर्नसक्छ र देशको आवश्यकता पनि पूरा गर्नसक्छ र त्यस्तो सरकारले गर्ने निर्वाचन निष्पक्ष पनि हुन्छ ।
० राष्ट्रिय सहमति भन्दाभन्दै चार दलको निर्णय सबैले मान्नुपर्ने स्थिति त रह्यो । तपाईंले भन्नुभएको राष्ट्रिय एकताको सरकार भनेको चाहिं कस्तो हो ?
राष्ट्रिय एकताको सरकार भनेको विघटित संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू र आवश्यक परेमा बाहिर रहेकाहरूलाई पनि आमन्त्रित गरेर बनाउने सरकार हो । चार दलको सिण्डिकेटले बनाउने सरकार होइन ।
० त्यसो भए हिजो एउटै पार्टीमा हुँदा चार दलको सिण्डिकेटलाई मान्नुभयो । अहिले अलग पार्टी गठन गरेपछि चार दलको मात्र हालीमुहाली कति पीडादायी हुँदोरहेछ भन्ने महसुस भयो हैन ?
त्यस्तो होइन । हामी एकीकृत माओवादीभित्रै हुँदा पनि यो प्रवृत्तिको त विरोध नै गर्दैआएका थियौं । यो विरोध हाम्रो पार्टी गठन भएपछि मात्र गरेका होइनौं । तीन वर्ष त त्यहाँभित्र लड्यौं नि । यस्ता निरंकुश र विदेशी दलालहरू पार्टीभित्र रहेका थिए तिनका बिरुद्ध लड्दै आएका हौं । अहिले आएर मात्र हामीले यो पीडाबोध गरेको होइन । पहिलेदेखि नै यस्तो खालका गलत प्रवृत्ति बिरुद्ध लड्दैआएका हौं र लडिरहन्छौं ।
० चार राजनीतिक दलहरूसंग दिन प्रतिदिन दूरी बढ्दो छ । यसलाई घटाएर सहमतिमा आउनुपर्छ भन्ने बोध तपाईंहरूलाई भएको छैन ?
दूरी बढ्ने र घट्ने भन्ने कुरा उनीहरूले लिएका निर्णयहरूमा भरपर्छ । उनीहरूको निर्णय जनविरोध छन् कि जनताको पक्षमा छन्, राष्ट्रविरोधी छन् कि राष्ट्रको पक्षमा छन् भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छ । हाम्रो व्यक्तिगत रुपमा कुनै दल वा नेताप्रति कुनै आग्रह–पूर्वाग्रह छैन । उनीहरू राष्ट्र र जनताको सेवाका लागि अउँछु भने भने उनीहरूसंग हाम्रो व्यवहार राम्रो हुन्छ ।